Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Qorsheynta oo gaaray Dhuusamareeb “SAWIRRO” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Qorsheynta oo gaaray Dhuusamareeb “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)-Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Qorshaynta Qaranka ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad Gobaleedka Galmudug, kuwaas oo qorshaha fulinta Istaraatiijiyadda Xalka waara kala tashan doona hay’adaha kala duwan ee Galmudug.
Wafdiga ay hoggaaminayso Agaasimaha Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Marwo Zahra Cabdi Maxamed oo ay wehliyaan khuburo iyo saraakiil kale ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta dowlad gobaleedka Galmudug iyo howladeenada Wasaaraddaasi.
Ujeeddada wafdigan ay u soo gaareen Gulmudug ayaa ah sidii loo dar-dar galin lahaa fulinta Istaraatiijiyadda xalka waara oo u dub dhaxaadka u ah sidii wax looga qaban lahaa Arrimaha barakaca ee saamaynta adag ku yeeshay bulshada nugul, taasoo sababta Abaaraha, fatahaadda iyo Masiibooyinka dabiiciga ah.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta dowlad Gobaleedka Galmudug Mudane Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in maalmahan ay ku sugan yahiin deegaannada Maamulka ay khubarada diiradda saari doonan arrimaha xalka waara ee barakaca, hanaanka loo fulinayo Istaraatiijiyadda Qaran ee Xalka waara.
Marwo Zahra Cabdi Maxamed Agaasimaha Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa tilmaamtay in ujeedka socdaalkooda ay la xiriirto sidii loo xoojin lahaa qaab dhismeedka shaqo heer Maamul-goboleed ilaa heer degmo, si loo fuliyo Istaraatiijiyadda Qaranka ee xalka waara,
Galmudug ayaa noqoneysa dowlad goboleedyada labaad ee sidan oo kale Wadatashi lagala leelanayo daadajinta qorshe howleedka fulinta Istaraatiijiyadda xalka waara ee heer Maamul.
Previous articleGuddiga Madaxa banaan ee Xuduudaha oo kulan laqaatay Mas’uuliyiinta ka socday Wasaaradaha Hirshabeelle “SAWIRRO”
Next articleSaraakiil ka tirsan ciidanka Hirshabeelle oo tababar uga furmay Jowhar “SAWIRRO”